motherboard အကြောင်း — MYSTERY ZILLION
Motherboardက Memory ဘယ်လောက်ထိ တိုးလို့ ရတယ် ဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ... သူ့ ပုံးမှာ ကြည့်ပါလို့တော့ မပြောကြေးနော်......... ပုံး က ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက ပျောက်သွားပြီ:D......... အဲ့ဒီ လို ကြည့်လို့ရမယ့် software လေးများရှိရင် ပေးကြပါ...... နည်းသိရင် ပြော ပေးကြပါ........... cpu id တော့ရှိတယ်.........
Dear Ko Swar Wai...
check @ Official site.
အကိုရေ နည်းနည်းရွှီးပါရစေ...အကိုပြောတာ motherboard မှာ memory ဘယ်လောက်ထိတိုးလို့ရလဲဆိုတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့(ပါးစပ်ကြီးနဲ့ပေါ့ နော်) board နဲ့ တင် ချိန်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ cpu / ram /northbridge/softbridge တွေ နဲ့လည်းချိန်ကြည့်ရတယ်ဗျ။ နောက်ပြီး board ရဲ့ manual မှာ လည်းပြပေး ထားပါတယ်..အမြင့် ဆုံး ဘယ်လောက် GB အနည်းဆုံး ဘယ်လောက် ဆိုပြီးပြပေးထားပါ တယ်။သူပြပေးထားတာထက်ပို တပ်ရင် ဘာမှ မတတ်တော့တာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်တင်မယ့် os အ ပေါ်မှာလည်း ဆိုင်ပါတယ်ဗျ ။eg . os က xp ဆိုရင် 4GB ပဲ အမြင့် ဆုံးစိုက်ရမယ်ဆိုရင် စလော့က လေးခုပါလို့ 2GB လေးချောင်း စိုက်ရင်လည်း အထက်ပါ အတို်င်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။cpu/ram တွေနဲ့ကတော့ သူတို့ရဲ့ bus speed တွေကို လိုက်ပြီး board ပေါ်က clock timer က အနှေး ဆုံး speed နဲ့ အလုပ်လုပ် ပေးမှာပါ။အကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိချင်ရင်တော့ စာအုပ်၀ယ်ဖတ်ကြည့်ဗျ ။အဲဒါ ပိုရှင်းတယ်ဗျ။ ဇော်လင်း(youth) တို့ မျိုးသူရ တို့တွေရေးထားတာ ရှိတယ်ဗျ။ကျွန်တော်လည်း သိပ်မသိသေးဘူး ဖတ်နေတုန်းပါခင်ဗျာ။ဒါကြောင့် ဒါကြောင့် နော် ...(အမှားပါ ရင် ခွင့်လွတ်ကြပါလို့ .....):D:D:D
ဒီဆော့ဖ်၀ဲလ်လေးနဲ့ ကြည့်လို့ရမလားသိဘူး။ cpuz လေ။ လိုချင်ရင် ဖိုင်ဟစ်ပိုမှာဒေါင်း ။ လိပ်တက်ဗားရှင်း ထွက်နေပြီ။
အကိုရေ နည်းနည်းရွှီးပါရစေ...အကိုပြောတာ motherboard မှာ memory ဘယ်လောက်ထိတိုးလို့ရလဲဆိုတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့(ပါးစပ်ကြီးနဲ့ပေါ့ နော်) :d board နဲ့ တင် ချိန်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ cpu / ram /northbridge/softbridge တွေ နဲ့လည်းချိန်ကြည့်ရတယ်ဗျ။ နောက်ပြီး board ရဲ့ manual မှာ လည်းပြပေး ထားပါတယ်..အမြင့် ဆုံး ဘယ်လောက် gb အနည်းဆုံး ဘယ်လောက် ဆိုပြီးပြပေးထားပါ တယ်။သူပြပေးထားတာထက်ပို တပ်ရင် ဘာမှ မတတ်တော့တာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်တင်မယ့် os အ ပေါ်မှာလည်း ဆိုင်ပါတယ်ဗျ ။eg . Os က xp ဆိုရင် 4gb ပဲ အမြင့် ဆုံးစိုက်ရမယ်ဆိုရင် စလော့က လေးခုပါလို့ 2gb လေးချောင်း စိုက်ရင်လည်း အထက်ပါ အတို်င်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။cpu/ram တွေနဲ့ကတော့ သူတို့ရဲ့ bus speed တွေကို လိုက်ပြီး board ပေါ်က clock timer က အနှေး ဆုံး speed နဲ့ အလုပ်လုပ် ပေးမှာပါ။အကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိချင်ရင်တော့ စာအုပ်၀ယ်ဖတ်ကြည့်ဗျ ။အဲဒါ ပိုရှင်းတယ်ဗျ။ ဇော်လင်း(youth) တို့ မျိုးသူရ တို့တွေရေးထားတာ ရှိတယ်ဗျ။ကျွန်တော်လည်း သိပ်မသိသေးဘူး ဖတ်နေတုန်းပါခင်ဗျာ။ဒါကြောင့် ဒါကြောင့် နော် ...(အမှားပါ ရင် ခွင့်လွတ်ကြပါလို့ .....):d:d:d
စာအုပ်နာမည်လေးပြောပါလား... နာမည်မသိပဲရှာရတာ ခက်လို့ပါ....